द गर्ल हु मेक्स अदर्स अ फूल - विचार - साप्ताहिक
- प्रेक्षा गजुरेल
(अ)प्रिय केटा साथी,
साथी र साथको अर्थ मेरो सोचाइ र बुझाइभन्दा धेरै पर रहेछ, तिम्रा लागि । मैले सोचेकी थिएँ, हामी टिनएजरका लागि साथी भनेका नै परिवार र सहपाठी हुन् । अहिले हामी उच्चशिक्षाका लागि आफ्नो घर–ठाउँबाट टाढा छौँ, यो अन्जान सहर काठमाडौँमा । यो सहरमा के हामी साथी नै एक–अर्काको सहारा होइनौं र ? रिसर्चका आधारमा हेर्ने हो भने पनि हाम्रो फ्रेन्ड्स सर्कलले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ, हरेक कुरामा तर साथी शब्दको डेफिनिसनको तह नै अर्कै पाएँ तिम्रो नजरमा मैले आज ।
बाल्यकालदेखि नै मेरो मिल्ने साथी शीर्षकमा थुप्रै अनुच्छेद लेखियो, तर ती अनुच्छेदमा उल्लेख गरेअनुरूपको केटा साथीचाहिँ आजसम्म पाइनँ । उतिबेला निबन्ध लेखियो, साथी भनेको दु:ख र सुखमा साथ दिने, खस्न आँटेको आँसु रोकेर ओठमा मुस्कान ल्याइदिने हुनुपर्छ र मेरो मिल्ने साथीमा यी सबै गुण छन् । त्यसैले म आफ्नो मिल्ने साथीलाई निकै माया गर्छु । मैले ती पंक्ति केटी साथीका लागि लेखेकी थिइनँ ।
म धेरै पटरपटर गर्ने मान्छे छिट्टै थुप्रै साथी बनाइहालेँ । यो केटा साथी हो, यो केटी साथी हो भन्ने भेदभाव नगरी मैले सबैका प्रति समान व्यवहार गरिरहेँ । केटी साथीहरूको नजरमा एउटी चुलबुले असल साथी बन्न पुगेँ भने तिम्रो नजरमा त मेरो कुनै मोल नै रहेनछ । म साथीका रूपमा तिम्रो नजिक हुन पुगेँ तर तिमीले त्यसलाई बुझ्न चाहेनौ ।
कलेजमा केटी साथीहरूसँगको ठट्टा रमाइलो मेरा नजिकका केटा साथीहरूसँग पनि जारी राखेँ, तर त्यसलाई तिमीले अर्कै रूपमा लिएछौं, जसलाई आज एउटाले त भोलि अर्काेले प्रपोज हानिरहन्छ । पहिलेभन्दा अहिले ममा अलिकति भिन्नता आएको छ, म मान्छु । पहिले म यस्ता रिक्वेस्ट आयो कि डराउँथेँ । किनभने म यो अन्जान सहरमा ब्वाइफ्रेन्ड बनाउन होइन, पढ्न आएकी हुँ । त्यसैले मैले तिम्रो प्रपोज एस्सेप्ट गर्ने कुरै भएन ।
मैले सोझै नाइँ भन्दा प्यारो साथीको भावनामा ठेस पुग्ला कि भनेर मैले तिमीलाई सम्झाउने प्रयास गरेँ, तर तिमीले बुझ्न चाहेनौं । मैले तिमीलाई बुझाउन नसक्ने रहेछु भनी आफ्नो साधारण जीवनलाई पहिलेकै रूपमा निर्धक्क चलाउन खोजेँ । तिम्रा अरू साथीका पनि यस्तै प्रपोज आइरहे । त्यसैले हिजोआज यस्ता कुराको मतलब नगरी म आफ्नै लक्ष्यतर्फ अग्रसर छु । तिमीलाई नाइँ भन्नुमा मेरो कुनै गल्ती छ र जो म शोक मनाएर बसूँ ? मलाई बुझ्ने मेरा अरू साथी पनि त छन् नि । के उनीहरूसँग हाँसखेल गर्दा तिमीलाई मेरो यो खुसी असह्य भयो ?
तिमी भन्छौ रे, त्यो केटीमा सोमत रहेनछ । त्यसले मलाई धोका दिई । मैले राम्रोसँग बुझिसकेँ त्यसलाई । त्यो मेरो लायक छैन ....। अरे यार, जिन्दगी मेरो हो, के म आफ्नो जिन्दगी हाँसेखल गर्दै जिउन नपाऊँ ? मलाई आखिर सम्झिन्छौं के तिमी ? मलाई धोका दिएर आनन्दले हाँसेर बसेकी छे भन्छौं साथीहरूसँग ।
जीवनमा खुसी रहने, हाँस्ने अधिकार सबैमा हुन्छ । सन् १९४८ मा आएको मानव अधिकारको अर्थ सही छ । म पनि मानिस हुँ । के तिमी मलाई मानिस मान्दैनौं ? के तिमी आफूलाई जन्म दिने आमा र माया गर्ने आफ्नी दिदी–बहिनीलाई पनि मानिस मान्दैनौ ? के महिला दोस्रो र तल्लो दर्जाका नागरिक हुन् ?
मेरो पनि हाँसेर बाँच्ने र नो भन्ने अधिकार छ । मेरो अधिकार उल्लंघन गर्ने अधिकार तिमीलाई छैन । माया शब्दको अर्थ मलाई पनि थाहा छ र युज एन्ड थ्रोको अर्थ पनि राम्रोसँग थाहा छ । यदि साँच्चै माया गथ्र्याैं भने मलाई मेरा आमा–बुबा, काका–काकी, भाइ–बहिनी, दिदी–दाजुको जस्तो माया गथ्र्यांै, मेरा क्लासमेट केटी साथीहरूले जस्तो माया गथ्र्याैं । तिमी मलाई साँच्चै माया गथ्र्याै भने के मैले नाइँ भनेपछि मेरा बारेमा अनर्गल कुरा गर्दै हिँड्थ्यौं ? आज तिमीले जुन व्यवहार देखायौ, त्यसमा मायाको म पनि छैन ।
तिमीले भन्यौ, तैंले दिएको चोट भुलाउने बाटो खोजिसकेँ, तँभन्दा राम्रीलाई गर्लफ्रेन्ड बनाइसकेँ । कस्तो माया तिम्रो ? यसो भन्छौ अनि फेरि मलाई जे पायो त्यही भन्ने हक कसले दियो तिमीलाई ? मायामा त दुवैको सम्मान र रुचि हुनु पर्दैन ?
मैले आजसम्म पनि बुझ्न नसकेको कुरा मोडर्नाइजेसन आयो भन्छन्, तर मानिसको भौतिक तहमा मात्र आएछ क्यार । अझै पनि म जस्ती खुसी चाहने, आफू हाँस्दै अरूलाई हँसाउन खोज्ने, आफ्ना पीडालाई मनभित्रै दबाएर खुसी बाँड्न चाहने चुलबुले स्वभावकी केटीलाई एउटी त्यस्ती केटीका रूपमा लिइन्छ जसले आइज, मलाई जिस्का भन्दै ग्रिन सिग्नल दिन्छे । केटा र केटी नभनी सहपाठी साथीहरूसँग बराबर हाँसोठट्टा गर्नु कहाँको पाप हो ?
मित्र र मित्रता जीवनमा निकै आवश्यक छ । त्यसैले पनि होला, म साथी बनाउन पछि हट्दिनँ । मेरा मित्र (र मित्री)हरूका व्यवहार र संगत अनि आफ्नै भोगाइ र देखाइबाट मैले के पाएँ भने, केटा भनेका आउटर वल्र्डसँग कन्फिडेन्ट हुनुपर्छ, तर केटी भनेका लजाएर र डराएर बस्नुपर्ने जात हुन् । नारी र पुरुषप्रतिको समानता केवल गफमा सीमित रहेछ । हाम्रो समाजमा आज पनि एक्टिभ, इन्टरेक्टिभ र कन्फिडेन्ट हुने हक केटालाई मात्र छ । केटीहरूलाई त अलिकति फ्र्यांक हुनेबित्तिकै बिग्रिएकी केटी भनिन्छ । म जस्तो रूपमा साथीहरूमाझ प्रस्तुत हुन्छु, यदि केटा भएको भए ऊ ‘कुल गाय’ अनि म चाहिँ ‘द गर्ल हु मेक्स अदर्स अ फूल ?’ के यही हो हाम्रो सोचको मोडर्नाइजेसन ?
मेरो (अ)प्रिय केटा साथी ! आज तिमीले जे अराथ्र्यौँ मलाई, त्यो सब सोच्दा मेरो रगत उम्लिएर आउँछ । म तिम्री त्यही साथी थिएँ, जसले तिम्रो आँखामा आँसु नआओस्, तिम्रो जीवनमा सधैँ खुसी र सुखको बास होस् भन्ने चाहेँ । तिमीले त मेरो पवित्र मित्रताको यति नराम्रोसँग अपमान गरेका छौं कि सोच्दासमेत मेरो मन रिस र आक्रोशले भरिन्छ, तैपनि म चुप छु ।
(प्रेक्षा कक्षा १२, विज्ञान संकाय,
नेपाल मेगा कलेज, बबरमहलमा
अध्ययनरत छिन् ।)
प्रकाशित :असार २९, २०७४